ट्याक्सीले ठग्यो ? १०० मा फोन गर्नुहोस तत्काल कारबाही हुन्छ – Mission Khabar
ट्याक्सीले ठग्यो ? १०० मा फोन गर्नुहोस तत्काल कारबाही हुन्छ
मिसन खबर १७ श्रावण २०७५, बिहीबार १९:५५
काठमाडौं– ट्याक्सी आम मानिसको यातायात सुविधाका लागि मिटरमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन । तर यहाँ ट्याक्सी सुविधा भन्दा बढी ठगी गर्ने साधन बनेको छ ।
गन्तव्य हेरेर भाडाको मोलमोलाइ गर्ने ट्याक्सी चालकलाई मनलाग्दी भाडा असुल्न छुट मात्रै छैन, मन लागेको ठाउँमा मात्रै जान राजी हुन्छन् । मिटरमा हिड्ने ट्याक्सी त निक्कै कम छन् । सरकार ट्याक्सीको भाडा निर्धारण गरेर मिटरमा त्यो पनि उपभोक्तालाई बिल सहितको सेवा दिनु भनिरहेको छ । तर चालक राज्यको नीति नियम लत्याइरहेका छन् ।
गाउँबाट काठमाडौंको घर वा डेरा आउँदा होस वा अपरझटको अस्पताल यात्रा काठमाडौंवासीले ट्याक्सीबाट ठगिनुपर्ने नियती हटेको छैन । झण्डै १० हजार ट्याक्सी रहेको काठमाडौंमा सरकारले दुई सय मिटरको ७ रुपयाँ २० पैसा भाडा निर्धारण गरेको छ । एयरपोर्टदेखि कलङ्कीसम्म यो दरका आधारमा लाग्ने भाडा ३५० पर्न गएपनि सर्वसाधारण सस्तोमा ६ सयदेखी १ हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
काठमाडौँको कलङ्कीदेखि चावहिल जाँदा नै ८ सय तिनु परेको बताउने उपभोक्तासँग मिटरमा हिड्न नमानेको गुनासो धेरै छ । सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको भद्रगोल अवस्थाको मार उपभोक्ताले खेपिरहेका छन् । यता, ट्राफिक महाशाखा ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान नगरेको, बढी भाडा लिएको वा मिटरमा जान नमानेको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
असार मसान्तसम्म मिटर जडान नगर्ने २६१, भाडामा मोलमोलाई गर्ने ६ हजार ४३ र खाली हुँदा पनि यात्रु बोक्न नमान्ने ६०३ ट्याक्सीलाई कारबाही गरिसकेको दाबी गर्ने ट्राफिक ठगिएको उजुरी १०० मा डायल गरेर टिपाउन उपभोक्तालाई आग्रह गर्छ । ट्याक्सीले ठग्न खोजे वा ठगेको सूचना पाउनासाथ कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी दोहोर्याइरहेको प्रहरी अब ट्याक्सी बिरुद्धको कारबाहीमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, यो प्रतिक्षा बनेको छ ।